Maxaa laga yeelayaa kuraastii ay xalaaleeyeen guddiigii uu shalay eryey ROOBLE? | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Maxaa laga yeelayaa kuraastii ay xalaaleeyeen guddiigii uu shalay eryey ROOBLE?
Muqdisho (Dalkaan.com) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay eryey 7 ka mid ah xubnaha Guddiga Xalinta Khilaafaadka doorashooyinka, oo uu ku eedeeyey inay lumiyeen kalsoonidii lagu qabay, islamarkaana ay ku milmeen dhinacyada siyaasadda ee ku loolamayo doorashada Soomaaliya.
Su’aalo ka dhashay qaraxii lala beegsaday Macallimuu iyo beegsiga saaxiibada Rooble
Muqdisho (Caasimada Online) – Kadib qaraxii is-miidaaminta ahaa ee maanta lala beegsaday Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya, Maxamed Ibraahim Macalimuu, waxaa isa-soo taraya shakiga ay siyaasyiinta...
Xidiga Manchester City Raheem Sterling oo doonaya inuu dhimo mushaarkiisa si...
Xog: Khasaaraha dagaalkii Boosaaso kasoo kala gaaray ciidamada Puntland iyo PSF
MADAXWAYNE AXMED QOORQOOR. ”DOORASHADU WAA MAQAAR SAAR EE DANO GAAR...
Wasiirka Amniga oo sheegay inuu tallaabo ka qaadayo saraakiishii joojiyay dibadbaxa
Yaa sabab u ahaa inuu fashilmo shirkii Farmaajo iyo maamul gobolleedyada...
Taliska Booliska oo war kasoo saaray dagaal ka dhacay garoonka Aadan...